Ụbọchị My Pet » 5 Mejọọ Men Mee ka nwere ike ibibi a Mmekọrịta
emelitere ikpeazụ: Nov. 30 2020 | 3 min agụ
Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị na ụwa a na-ụdị, ebube ndị na nnukwu obi otú isiokwu a abụghị n'ụzọ dissing ha. Ọ bụ banyere 5% ndị na-adịghị ada n'ime otu emi. Ọ bụ ezie na na 5% e nwere ike ịbụ a otutu ezi ndị mmadụ, dị nnọọ adịghị mma enyi nwoke ihe onwunwe ma ọ bụ ikekwe ha ahụghị onye ma ndị ha ga-ada n'elu azu azu ime ihe niile n'ihi na. Ke ibuotikọ emi m na-aga ide banyere ụzọ ise a 5% pụrụ imebi mmekọrịta.
The ihe banyere mgbe mmadụ aghụghọ bụ na ha karịrị yiri na-adịghị na-na ịhụnanya na onye na ha na-. Mgbe a Ihọd bụ na ịhụnanya na onye ọ gaghị aghọ aghụghọ ule ha n'ihi na onye ọ bụla pales tụnyere. Nke ahụ abụghị na-ekwu na ọ dịghị anya na-apụghị ịhụ na mmadụ bụ onye ezi-na-achọ. Echere m na anyị nile ga-agha ụgha ma ọ bụrụ na anyị kwuru mgbe anyị nọ n'ebe a mmekọrịta anyị na-adaghị, ma ihe dị iche bụ mgbe ị na-na ịhụnanya ị na-adịghị mee ihe banyere ya. Ya mere, mgbe a Ihọd Ndị aghụghọ ọ na-egosi na ọ bụghị na na ịhụnanya na ibe ya na ọ na-emepụta a enweghị ntụkwasị obi na a otutu di na nwunye nwere ike ghara-abịa azụ.
Ọrụ Dị ka A jerk
Mesoro bụ a jụụ anya. Ma, e nwere ụmụ okorobịa ndị nwute na-eche na ọ bụ. Ọbụna ụfọdụ na-eche na ọ bụ mma na “otú onye a ga-eme” na ihe nile nke ihe efu. Ọ bụghị iwu na a ga-agba ọsọ na okooko osisi ise ọ bụla minit ma ọ dịghị ewe a otutu dị nnọọ na-mma. Na a ụzọ m ịghọta ihe mere a otutu okorobịa mgbe ụfọdụ ime ihe dị ka nke a ma ọ bụrụ na ha na-adịghị a jerk N'obi. A ọtụtụ ndị na-eme ka dum ọjọọ nwatakịrị nwoke persona ma m na-eche ebe nkwurịta okwu ego n'anya bịara ikiri ebe ahụ bụ na ha chọrọ a ọjọọ nwatakịrị nwoke ya na ezi obi bụ ndị ga na-emeso ha nke ọma ma na e nwere ihe a oke dị iche n'etiti ihe ọjọọ nwatakịrị nwoke ya na ezi obi na onye na-akparị gị ma na-ewepụta gị ala mgbe niile. Echere m na ebere nwere ike mgbe ụfọdụ a hụrụ ka a adịghị ike mgbe n'ezie na ọ bụ a ike na ọtụtụ n'ime ndị kasị mma mmekọrịta bụ ebe ma ndị mmadụ na-emeso ibe ọma.
Akụrisị ha Partner
Dị ka isiokwu a bụ banyere ụmụ okorobịa m na-ede akụkụ a banyere a Ihọd ọkụkụ ha na onye òtù ọlụlụ ma nke a na ngalaba, ka ọ bụla ngalaba na ya, nwere ike a n'ọrụ ihe a nwaanyị na-eme n'iyi a mmekọrịta kwa ya mere m ọ dịghị ụzọ na-ekwu na naanị ụmụ okorobịa kụrụ ha mmekọ. M na-gụnyere nke a n'ihi na ọ bụ nke ugliest ihe mmadụ nwere ike ime ma ga-abụ n'ezie kwụsị a mmekọrịta si na-enwe ọganihu na maa kwesịrị ịkwụsị ya. Ekwela ka onye ọ bụla ọ sọkwara ị hụrụ ha n'anya na-ekwurịta gị gburugburu ma ọ bụrụ na ha ahụ na-afụ ụfụ gị.
-Etinye onye ọ bụla ọzọ n'ihu gị
Mgbe ị nọ ogologo okwu mmekọrịta, ị bụ otu. Ha na-agaghị kwesịrị etinye ezinụlọ ha, enyi, onye ọ bụla n'ihu gị na-ewere ndụmọdụ ha mgbe niile n'elu gị. N'akuku gi eleghị anya ị ghara itinye ha n'ọnọdụ ebe ha ga-ekpebi ma ọ bụrụ na ọ na-abịa ihe dị ka nne ha anaghị amasị gị na chọrọ ya ka o wee bibie ya na ị, ọ bụrụ na ha hụrụ gị n'anya na ha ga-etinye gị na mmekọrịta gị mbụ.
Edozi N'ihi Nke abụọ Best
Echere m na anyị nile maara mgbe anyị na-nkasi-obi-agbata n'ọsọ. Ha nwere ike ịbụ na ịhụnanya na onye ọzọ na ha dara site na ma ọ bụ na ha echeghị otú ahụ banyere ha nke mere na ha biri n'ihi na ị na-ahụ bụ mgbe a ezi ihe ndabere maka a mmekọrịta. Echere m na anyị nile ịchọ fairytale, ihe ọ bụla na fairytale pụtara anyị, na ọtụtụ ndị na-emesị edozi maka onye ka ọ ghara ịnọ nanị nke ahụ n'onwe ya bụ ụdị ihe kwere nghọta ma ọ bụghị ihe ọma mgbe otu akụkụ a onye na-ele ka ndụ ha na mmadụ na--ha fairytale mgbe nke ọzọ onye na-ahụ ya dị ka ndị kasị mma ha nwere ike mere mgbe onye ha hụrụ n'anya pụọ ​​na a ọnọdụ dị ka nke ahụ n'ikpeazụ mgbe niile agwụ na obi ụtọ, obi.
Ise Life Mụtara Site nwamba na Mmekọrịta